Mogadishu Journal » Qoor-qoor oo 5 arrimood kala hadlay wakiilada beesha caalamka ee Somalia (Sawirro)
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa maanta la kulmay qaar ka mid ah danjirayaasha beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya.
Kulanka oo ay Beesha Caalamka ku matalayeen Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Ergeyga Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya iyo Danjirayaasha Midowga Yurub, Sweden, Norway, UK iyo diplomasiyiin kale.
Madaxweynaha & xubnaha beesha caalamka ayaa ka wada hadlay dardargelinta doorashooyinka, amniga doorashooyinka, xaqiijinta qoondada haweenka iyo taageerada beesha caalamka ee ku aaddan habsami usocodka doorashada.
Kulanka ayaa dhinaca kale looga hadlay Arrimaha horumarinta Galmudug, amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagaxisada sidii beesha caalamku gacan uga geysan laheyd howlahaas la soo xusay.
Qoor-qoor oo uu wehlinayey Madaxweynaha Koonfur galbeed Laftagareen ayaa ku guul dareystay waan-waan ay ka dhex wadeen madaxda sare ee dalka oo ka dhalatay kiiska dilka Ikraan Tahliil iyo xilka ka qaadista Taliye Fahad Yaasiin.